Laser Cutting Machine, Laser Engraving Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser - 体彩会开欧洲杯,在线买猜球平台软件,体彩竞彩网世界杯冠军
马sinina tamin'ny laser
马sinina fanapahana laser amin'ny fahitana
马sinina fanapahana laser Flatbed
马sinina Laser Galvo CO2
马sinina fanapahana laser maty
马sinina manapaka laser
MIarahaba anao amin'ny laser volamena
GOLDEN LASER dia mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana laser marani-tsaina, nomerika ary mandeha ho azy.
Mpanamboatra ny rafitra laser amin'ny fanapahana, ny sokitra ary ny fanamarihana. Ilay manam-pahaizana manokana amin'nymilina fanapahana laser lasersymilina laser Galvo.
马nomboka amin'ny fakan-kevitra voalohany ka hatramin'ny fitsapana fampiharana miaraka amin'ireo fitaovana noforoninao tamina indostria manokana ka hatramin'ny fampiofanana ho an'ny mpampiasa sy serivisy manerantany - GOLDEN LASER dia manome vahaolana laser feno, tsy milina tokana!
COUTER MAFANA MAZOTA
VISION CASTER VISION
Model No.:JMCCJG / JYCCJG Series
马sinina haingam-pandeha laser vita amin'ny lamba vita amin'ny indostrialy
Ity andiany ity CO2 milina fanapahana laser fisaka natao ho an'ny horonana lamba sy fitaovana malefaka mandeha ho azy ary manapaka tsy tapaka. Nentin'ny alàlan'ny fitaovana sy ny talantalana niaraka tamin'ny motera servo, ny fanapahana laser dia manome ny hafainganam-pandeha farany haingana sy haingana.
Fiara mifono vy avo lenta sy entona. Manapaka haingana hatramin'ny 1200mm / s. Laser tamin'ny laser RF 150W ka hatramin'ny 800W. Rafitra mpampita rivotra. Auto-feeder miaraka amin'ny fanitsiana fihenjanana. Mety amin'ny fanapahana lamba sivana, tsihy sivana, polyester, PP, fiberglass, PTFE ary lamba indostrialy.
Model No.:JMCZJJG (3D) -250300LD
马sinina fanapahana laser vita amin'ny rivotra lamba
Fitambarana endrika lehibe X, fanapahana laser axis Y (fanapahana) ary perforating haingam-pandeha Galvo haavo (lavaka tapaka laser). Natao ho an'ny fanapahana ny fantson-drivotra fanodinana lamba (fantson'ny sock, fantson'ny sox, sox duct, sock duct, duct air textile, sock air, sox air)
马sinina fanapahana laser haben'ny latabatra lava
Farafara fandefasana lava fanampiny-6 metatra ka hatramin'ny 13 metatraho an'ny fitaovana lava be, toy ny tranolay, lamban-dranomasina, parachute, paraglider, canopy, marquee, awning, parasail, sunshade, carpets fiaramanidina…
Model No.:JMCZJJG (3D) 170200LD
Model No.:ZJJF (3D) -160LD
Model No.:ZJ (3D) -9045TB
马sinina haingam-pandeha amin'ny laser Galvo haingam-pandeha ho an'ny kiraro hoditra
Model No.:ZJ (3D) -15050LD
Rafitra fitiliana galvanomètre midadasika. Loharano laser marobe mba hampitomboana ny vokatra. Famahanana sy famerenana mandeha ho azy - mpanelanelana…
Ny laser laser dia mety amin'ny fanapahana lamba vita amin'ny lamba nomerika amin'ny endriny sy habe rehetra. Ny fakantsary dia mizaha ny lamba, mahita ary mamantatra ny contour vita pirinty, na maka marika amin'ny fisoratana anarana pirinty ary manapaka ny endrika nofidina tamin'ny hafainganam-pandeha sy marina.
马sinina fanapahana laser Dual Head Vision Camera
Ny rafitra fanapahana laser roa loha tsy miankina dia natambatra tanteraka tamin'ny rafitra fahitana marani-tsaina, ary nohatsaraina bebe kokoa amin'ny fitakiana fanodinana sary vita pirinty.
Ny fisoratana anarana avo lenta dia manamarika ny fametrahana sy ny fanonerana deformation manan-tsaina ho an'ny fanapahana laser amin'ny laoniny ny logo, ny litera ary ny isa.
Ny fanapahana laser lehibe amin'ny fahitana dia manokana ho an'ny indostrian'ny pirinty nomerika - mamokatra fahaiza-manao tsy manam-paharoa amin'ny famitana endrika maro an-tsary na sary miloko vita amin'ny soratra vita amin'ny loko, sora-baventy ary takelaka malefaka.
Famonoana激光tsy manam-paharoa sy famadihana vahaolana ho famaranana ny marika. Ny mpamaky kaody QR dia manohana ny fanovana mandeha ho azy. BST Web Guide dia mahatonga ny famahana sy ny famerenana amin'ny laoniny ho mazava kokoa.
LC230 dia milina famaranana lasantsy, ara-toekarena ary niomerika tanteraka miaraka amin'ny 230mm ny sakany indrindra amin'ny Internet. Safidy tsara ho an'ny hazakazaka fohy dizitaly izy io. Manolotra fiovana aotra amin'ny fotoana ary tsy misy vidin'ny takelaka maty.
马nokana ny vahaolana amin'ny fanapahana laser sy ny sokitra izahay ho an'ny fampiharana marobe. Ireto misy vitsivitsy fotsiny amin'ireo rindranasa izay matetika iasantsika.
Miaraka amin'ny fanavaozana ny haitao matanjaka, Golden Laser dia afaka manome milina sy vahaolana laser namboarina, ataovy mahomby sy mahasoa kokoa ny famokarana anao.
Topazo maso eto raha mila fampahalalana momba ny indostria mifandraika amin'izany sy ireo vaovao sy hetsika vao haingana.
Laser sticker fanapahana, miaraka amin'ny fanapahana miovaova, haingam-pandeha ary miendrika endrika manokana ...
马sinina fanapahana maty laser dia mety tsara amin'ny labozy niova niomerika ary nanolo ny fomba fanapahana antsy maty nentim-paharazana. Nanjary "fisongadinana vaovao" eo amin'ny tsenan'ny fanodinana marika…
Jereo ny firoboroboan'ny famokarana amin'ny taona 2021
Taona sarotra ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena manerantany ny 2020, satria sahirana miatrika ny fiantraikan'ny COVID-19 izao tontolo izao. Ny krizy sy ny fahafaha-manao dia lafiny roa. Mbola manantena ny hamokatra hatrany izahay…
Karatra Krismasy fanapahana laser - Fomba vaovao hankalazana ny Noely 2020
Ny karatra fiarahabana amin'ny fanapahana laser dia mety hamorona vokatra tsy ampoizina maro koa, miandry anao hahita. Raha liana amin'ny karatra fiarahabana voapaika tamin'ny laser na asa tanana vita tamin'ny laser ianao dia tongasoa ny hifandray amin'i goldenlaser…
马namboatra famaritana mazava tsara
Tamin'ny 20 taona niainany tamin'ny indostrian'ny laser, mivoatra hatrany ary mampiasa teknolojia mandroso, ny EMASTER Laser dia lasa mpanamboatra milina laser miaraka amina fahaizana manokana.
GOLDEN LASER dia manome anao vahaolana amin'ny laser matihanina ho an'ny indostrian'ny rindrambaiko manokana - hanampiana anao hampitombo ny vokatra, hanamorana ny fomba fanodinana ary hahazoana tombony bebe kokoa.
Eo amin'ny tsena ampitan-dranomasina dia nanangana tambajotra marketing matotra any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 manerantany ny GOLDEN LASER, miaraka amin'ireo vokatra mifaninana sy rafitra fanavaozana miorina amin'ny tsena.
马sinina Laser Galvo